၃ပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် “ နှင်းဆီရဲတိုက် “ - Mandalay Directory
၃ပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် “ နှင်းဆီရဲတိုက် “
“ နှင်းဆီရဲတိုက် “ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ ဖေ့ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ Trailer ကြည့်ရှုမှုအများဆုံးနဲ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ မမြင်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ “ အောင်ရဲလင်း “ ကိုလည်း ဒီကားမှာ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားဟာ ဒါရိုက်တာနေပိုင်မှ ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ၃ ပွင့်ဆိုင် အချစ်ဒရာမာဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် မို့မို့မြင့်အောင်၊ အောင်ရဲလင်း၊ ကောင်းပြည့်၊ ရွှေမှုန်ရတီတို့မှ အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
အောင်ရဲလင်းကတော့ တစ်မူးဆိုတဲ့ကောင်လေးအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး မိဘမဲ့၊ လမ်းပေါ်မှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်၊ ဖဲရိုက်တတ်တယ်၊ ကြက်တိုက်တတ်တယ်၊ လိမ်တတ်တယ် ငွေရရင်ဘာမဆိုလုပ်တတက်တဲ့ ကောင်းလေးတစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
မိုးပန်းချီ ဆိုတဲ့ ကောင်းမလေးအဖြစ် ရွှေမှုန်ရတီကတော့ ပန်းချီဆွဲရတာ ဝါသနာပါပြီး မွေးကတည်းက မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူမ အသက်(၁၀)နှစ်ကို ရောက်တဲ့အခါမှာ ဦးမင်းမဟာရဲ့ အိမ်မှာ လိုက်နေရဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူတို့ ဘယ်လိုချိတ်ဆက်သွားမှာလဲ? ကြားထဲမှာ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းတာတွေ၊ ထင်မထားတဲ့ကိစ္စတေ ဘာတွေဘယ်လို ဖြစ်လာဦးမလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Read More>>>ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက်မှစ၍ မန္တလေးရှိ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ကြည့်ရှုနိုင်မည့် ဇာတ်ကားများ
ဒါကြောင့် My Mandalay ပရိတ်သတ်တွေအတွက် မန္တလေးမြို့မှာ “ နှင်းဆီရဲတိုက် “ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပြသနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၃။ Myo Gone Yaung ( ဖုန်းနံပါတ် - 024060365 )
၄။ မင်္ဂလာမန်းနေပြည်တော် (ဆိုင်းတန်း) (ဖုန်းနံပါတ်များ - 09-952270811, 09-952280811, 09-952290811 )
၅။ မင်္ဂလာစင်ထရယ်ပွိုင့် ( ဖုန်းနံပါတ်များ - 09-954086841, 09-954086842, 09-954086843 )
၆။ မြို့မ ( ဖုန်းနံပါတ်များ - 02-4039136, 02-403 )
“ နွင္းဆီရဲတုိက္ “ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးဟာ ေဖ့ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ Trailer ၾကည့္ရႈမႈအမ်ားဆံုးနဲ႔ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ဇာတ္ကားတစ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္။ မျမင္တာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ နွုတ္ခမ္းနီမေလးေတြရဲ႕ အသည္းစြဲ “ ေအာင္ရဲလင္း “ ကိုလည္း ဒီကားမွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကားဟာ ဒါရိုက္တာေနပုိင္မွ ပံုေဖာ္ရုိက္ကူးထားတဲ့ ၃ ပြင့္ဆိုင္ အခ်စ္ဒရာမာဇာတ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ဝါရင့္သရုပ္ေဆာင္ မုိ႔မို႔ျမင့္ေအာင္၊ ေအာင္ရဲလင္း၊ ေကာင္းျပည့္၊ ေရႊမႈန္ရတီတို႔မွ အဓိက ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။
ေအာင္ရဲလင္းကေတာ့ တစ္မူးဆုိတဲ့ေကာင္ေလးအျဖစ္ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားၿပီး မိဘမဲ့၊ လမ္းေပၚမွာပဲ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတယ္၊ ဖဲ႐ိုက္တတ္တယ္၊ ၾကက္တိုက္တတ္တယ္၊ လိမ္တတ္တယ္ ေငြရရင္ဘာမဆုိလုပ္တတက္တဲ့ ေကာင္းေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။
မိုးပန္းခ်ီ ဆုိတဲ့ ေကာင္းမေလးအျဖစ္ ေရႊမွုန္ရတီကေတာ့ ပန္းခ်ီဆြဲရတာ ဝါသနာပါၿပီး ေမြးကတည္းက မိဘမဲ့ေဂဟာမွာ ေနထုိင္ခဲ့ရပါတယ္။ သူမ အသက္(၁၀)နွစ္ကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဦးမင္းမဟာရဲ႕ အိမ္မွာ လိုက္ေနရဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ပုိင္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သူတို႔ ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္သြားမွာလဲ? ၾကားထဲမွာ စိတ္လႈပ္ရွားဖုိ႔ ေကာင္းတာေတြ၊ ထင္မထားတဲ့ကိစၥေတ ဘာေတြဘယ္လို ျဖစ္လာဦးမလဲဆိုတာ ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ ၾကည့္ရွုခံစားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ My Mandalay ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ “ နွင္းဆီရဲတုိက္ “ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျပသေနတဲ့ ရုပ္ရွင္ရုံေတြကိုေဖာ္ျပပေးလိုက္ပါတယ္။
၃။ Myo Gone Yaung ( ဖုန္းနံပါတ္ - 024060365 )
၄။ မဂၤလာမန္းေနျပည္ေတာ္ (ဆိုင္းတန္း) (ဖုန္းနံပါတ္မ်ား - 09-952270811, 09-952280811, 09-952290811 )
၅။ မဂၤလာစင္ထရယ္ပြိဳင့္ ( ဖုန္းနံပါတ္မ်ား - 09-954086841, 09-954086842, 09-954086843 )
၆။ ၿမိဳ႕မ ( ဖုန္းနံပါတ္မ်ား - 02-4039136, 02-403 )
Myo Gone Yaung